साइक्लोस्ट्रैजेनोल (क्याग) T-65 को रूपमा पनि चिनिन्छ एक प्राकृतिक टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड यसबाट प्राप्त गरिएको हो Astragalus membranaceus बोट यो पहिलो पटक पत्ता लागेको थियो Astragalus membranaceus एक्स्ट्र्याक्ट एन्टी-एजिंग गुणहरूसँग यसको सक्रिय सामग्रीहरूको लागि मूल्यांकन गरिएको थियो।
साइक्लोस्ट्रैजेनोललाई एस्ट्रॅगलोसाइड IV बाट हाइड्रोलिसिस कार्य मार्फत पनि निकाल्न सकिन्छ। Astragaloside IV प्रमुख सक्रिय संघटक हो Astragalus membranaceus जडिबुटी यद्यपि साइक्लोस्ट्रैजेनोल र एस्ट्रागेलोसाइड IV तिनीहरूको रासायनिक संरचनामा समान छ, साइक्लोस्ट्रैजेनल आणविक तौलमा एस्ट्रगैलोसाइड IV भन्दा हल्का छ। फलस्वरूप, साइकोलोस्ट्रेजेनोल उच्च जैविक उपलब्धता र यसैले साइक्लोस्ट्रैजेनोलको उच्च चयापचयको कारण अधिक कुशल छ। साइक्लोस्ट्रैजेनोलको उच्च चयापचय निष्क्रिय प्रसारको माध्यमबाट आन्द्राको उपकलामा उल्लेख छ।
एस्ट्रगलस जडिबुटी शताब्दीयौंसम्म चिनियाँ परम्परागत औषधिको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ र आज पनि प्रयोग भइरहेको छ। एस्ट्र्याग्लस प्लान्ट यसको लाभदायक प्रभावको कारण प्रयोग गरिएको छ एन्टि बैक्टीरियल, एन्टी-इन्फ्लेमेन्टरीका साथै प्रतिरोध क्षमता बढाउने क्षमता सहित।
क्यागलाई एन्टी-एजिंग कम्पाउन्डको रूपमा संकेत गरिएको छ जसले एंजाइम टेलोमेरास र घाउ निको पार्ने गतिविधिलाई बढावा दिन्छ। यो वर्तमानमा मानिसमा टेलोमेरास उत्पन्न गर्नका लागि चिनिने प्रमुख यौगिक हो, यसैले थप विकासको लागि यो ठूलो सम्भावित पूरक हो।
साइक्लोस्ट्रैजेनोल टेलोमेरास एक्टिभेटरको रूपमा चिनिन्छ, जसले टेलोमेरेसको लम्बाइ बढाउनको भूमिका खेल्दछ। टेलोमेर्स क्रोमोजोमको अन्तमा न्यूक्लियोटाइड दोहोरिने सुरक्षात्मक क्याप्स हुन्। यी टेलोमेर्सहरू प्रत्येक सेल डिभिजन पछि छोटो हुन्छन् जसले सेल सेन्सेंस र गिरावटको परिणाम दिन्छ। यसबाहेक, टेलोमेरेसलाई अक्सिडेटिभ तनावले छोट्याउन पनि सक्छ।
टेलोमेरेसको यो चरम छोटो उमेर, मृत्यु र केही एजी-सम्बन्धित विकारहरूसँग सम्बन्धित छ। भाग्यवस, टेलोमेरास एन्जाइमले यी टेलोमेर्सको लम्बाइ बढाउन सक्षम छ।
यद्यपि साइक्लोस्ट्रेजेनोलको जीवनकाल विस्तार गर्न सक्ने क्षमता प्रमाणित गर्न कुनै व्यापक अध्ययनहरू छैनन्, यो एक बढ्दो रोधी विरोधी एजिंग हो। यो ठीक लाइनहरू र झि .्गी सहित बुढेसकालका लक्षणहरू हटाउन प्रमाणित भएको छ। क्यागले डिजेनेरेटिव डिसआर्डरहरू जस्तै पार्किन्सन, अल्जाइमरको, र मोतियाबिन्दु।
धेरैको बावजुद cycloastragenol स्वास्थ्य लाभ, त्यहाँ यसले क्यान्सर निम्त्याउने वा क्यान्सरको गति बढाउन सक्ने चिन्ताहरू छन्। यद्यपि, पशु विषयहरूसँग गरिएको केही अध्ययनहरूले क्यान्सरको कुनै पनि घटना बिना साइक्लोस्ट्रेजेनोलको फाइदाहरू रिपोर्ट गर्छ।
बिक्रीको लागि साइक्लोस्ट्रैजेनोल पाउडर सजिलै अनलाइन उपलब्ध छ र धेरै प्रख्यात साइक्लोस्ट्रैजेनोल आपूर्तिकर्ताहरूबाट खरीद गर्न सकिन्छ।
बावजुद, धेरै साइक्लोस्ट्रैजेनल स्वास्थ्य लाभहरू संकेत गरिए पनि, यो अझै पनी अध्ययन अन्तर्गत नयाँ सदस्य हो। यसबाहेक, साइक्लोस्ट्रैजेनोल साइड इफेक्ट धेरै स्पष्ट हुँदैन, त्यसैले सावधानीको साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ।
साइक्लोआस्ट्रेजेनोल भनेको के हो?
साइक्लोस्ट्रैजेनोल एस्ट्र्याग्लस जडिबुटीको जराबाट निकालिएको एक triterpenoid saponin कम्पाउन्ड हो। Astragalus membranaceus बोट २००० भन्दा बढी वर्षदेखि परम्परागत चिनियाँ औषधि (TCM) मा प्रयोग भइरहेको छ र अझै पनि जडिबुटी तयारीमा प्रयोग भइरहेको छ।
एस्ट्र्याग्लस जडिबुटी रोग प्रतिरोध क्षमता सुधार गर्न, जीवित बचाउन, मूत्रलका रूपमा काम गर्ने क्षमताको लागि परिचित छ अन्य स्वास्थ्य गुणहरू जस्तै एन्टी-अतिसंवेदनशीलता, जीवाणुरोधी, विरोधी उमेर र विरोधी तनाव लाभ।
साइक्लोआस्ट्रेजेनल सामान्य रूपमा चिनिन्छ TA-65 तर यसलाई साइक्लोगालाजेनिन, साइक्लोगालेजेनिन, साइक्लोगालेगीजेनिन, र एस्ट्रामेम्ब्रेंजिन पनि भनिन्छ। साइक्लोस्ट्रैजेनोल पूरै धेरै हदसम्म एन्टी-एजिंग एजेंटको रूपमा चिनिन्छ, यद्यपि, अन्य साइक्लोस्ट्रैजेनल स्वास्थ्य लाभहरूमा प्रतिरक्षा प्रणाली, एन्टी-इन्फ्लेमेटरी र एन्टी-ऑक्सीडेटिभ गुणहरू बढाउने समावेश छ।
साइक्लोस्ट्रैजेनोल र एस्ट्रागालोसाइड IV
दुबै साइक्लोस्ट्रैजेनोल र एस्ट्रागेलोसाइड IV एस्ट्र्याग्लस प्लान्ट एक्स्ट्रैक्टमा प्राकृतिक रूपमा हुन्छन्। Astragaloside IV प्राथमिक सक्रिय संघटक हो एस्ट्रॅगलस झिल्लीयद्यपि मूलमा मिनेटको मात्रामा हुन्छ। यी saponins को निकाल्ने प्रक्रिया, cycloastragenol र astragaloside IV, प्राय: शुद्धिकरणको आवश्यक स्तरको कारण गाह्रो हुन्छ।
दुवैको रूपमा cycloastragenol र astragaloside IV एस्ट्रागलस जडिबुटीबाट लिइएको हो, साइक्लोस्ट्रैजेनोल हाइड्रोलिसिस प्रक्रियाको माध्यमबाट एस्ट्रेलोसिड IV बाट पनि लिन सकिन्छ।
यी दुई यौगिकहरूको एक समान रासायनिक संरचना छ, तथापि, साइक्लोआस्ट्रेजेनल आणविक तौलमा एस्ट्रॅगलोसाइड IV भन्दा हल्का छ र यो अधिक जैवउपलब्ध पनि छ।
साइक्लोस्ट्रैजेनोलको कार्य संयन्त्र
i. टेलोमेरास सक्रियता
टेलोमेर्स रेखिक क्रोमोसोमको छेउमा न्यूक्लियोटाइड दोहोरिन्छ र प्रोटिनहरूको निश्चित सेटले बाध्य पार्दछ। टेलोमेर्स स्वाभाविक रूपमा हरेक सेल डिभिजनको साथ छोटो हुन्छ। टेलोमेरास, एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जटिल हो जसले उत्प्रेरक रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेस एन्जाइम (TERT) र एक टेलोमेरास आरएनए घटक (TERC) ले टेलोमेरेस लम्बाउँछ। टेलोमेर्सको मुख्य भूमिका क्रोमोसोमलाई फ्यूजन र गिरावटबाट बचाउनको लागि हो, कोषहरू प्रायः अत्यन्त छोटो टेलोमेरेस बिग्रिएको डीएनएको रूपमा चिन्छन्।
साइक्लोस्ट्रैजेनोल टेलोमेरास सक्रियताले टेलोमेर्सको लम्बाइमा परिणाम दिन्छ जुन फलस्वरूप लाभदायक प्रभावहरू प्रदर्शन गर्दछ।
Ii। लिपिड मेटाबोलिजम बढाउँदछ
लिपिडहरू स्वाभाविक रूपमा हाम्रो शरीरमा उर्जाको लागि स्टोरको रूपमा काम गर्दछ। यद्यपि यी लिपिडहरू धेरै नै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ।
साइक्लोस्ट्रैजेनोलले विभिन्न लिपिड मेटाबोलिजम बायोमार्करहरू मार्फत स्वस्थ लिपिड मेटाबोलिजमलाई बढावा दिन्छ।
पहिले, कम खुराकमा, क्यागले 3T3-L1 एडिपोसाइट्समा साइटोप्लास्मिक लिपिड ड्रपलेटहरू कम गर्दछ। दोस्रो, जब अधिक मात्रामा प्रयोग गरिन्छ, क्यागले TT3-L3 प्रिआडीपोसाइट्सको भेदभावमा बाधा उत्पन्न गर्दछ। अन्तमा, क्यागले 1T3-L3 प्रिआडीपोसाइट्समा क्याल्शियम इन्फ्लो ट्रिगर गर्न सक्दछ।
उच्च इन्टरसेल्युलर क्याल्शियमले एडिपोसाइट्स भेदभावलाई दबाउन सक्छ, क्यागले क्याल्शियमको आवकलाई उत्तेजित गरेर लिपिड मेटाबोलिजममा सन्तुलन ल्याउँदछ।
Iii। Antioxidant गतिविधि
अक्सिडेटिभ तनाव धेरै रोगहरूको जरा हो र सेल सेन्सेंस पनि। शरीरमा स्वतन्त्र रेडिकलहरूको अधिक हुँदा त्यहाँ अक्सिडेटिभ तनाव देखा पर्दछ।
साइक्लोस्ट्रैजेनोलले एन्टिआक्सीड्यान्ट गुणहरू प्रदर्शन गरेर एन्टिऑक्सिडन्ट क्षमता बढाउँदछ। यो एन्टिऑक्सिडन्ट गतिविधि क्यागमा फेला परेको हाइड्रोक्सिल समूहसँग सम्बन्धित छ।
यसबाहेक, अक्सिडेटिभ तनाव टेलोमेरी छोटो हुनुको मुख्य कारण हो, यसैले क्याग टेलोमेरे संरक्षण दुबै एन्टिऑक्सिडन्ट गतिविधि र टेलोमेरास सक्रियताबाट लिइएको हो।
iv। विरोधी भड़काउने गतिविधि
जबकि सूजन एक प्राकृतिक माध्यम हो जस द्वारा शरीर संक्रमण वा चोट विरुद्ध लड्छ, लामो सूजन हानिकारक छ। जीर्ण सूजन धेरै विकारहरू जस्तै निमोनिया, मधुमेह, हृदय विकारहरू र गठियासँग सम्बन्धित छ।
साइक्लोस्ट्रैजेनोल पाउडरले विरोधी भड़काउने गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ। साइक्लोस्ट्रैजेनोलको एन्टी-भड़काउने फाइदाहरू लिम्फोसाइट्सको प्रसार रोक्न र AMP- सक्रिय प्रोटीन किनेस (एएमपीके) फास्फोरिलेसन सुधार गर्ने बिभिन्न तरिकाहरू मार्फत हुन्।
i.साइक्लोस्ट्रैजेनोल र प्रतिरक्षा प्रणाली
साइक्लोस्ट्रैजेनोलले टी लिम्फोसाइटको प्रसारलाई बढावा दिएर प्रतिरोधक क्षमता सुधार गर्न सक्छ। टेलोमेरास सक्रिय गर्न साइक्लोस्ट्रैजेनोल पूरकको क्षमताले डीएनए मर्मतलाई उत्प्रेरित गर्न सक्षम गर्दछ जबकि ओ ओ टेलोमेरेको विकास र विस्तार।
Ii।साइक्लोस्ट्रैजेनोल र एंटी-एजिंग
Cycloastragenol एंटी-एजिंग गुणहरू आज धेरैजसो अनुसन्धानको मुख्य रुचि हुन्। क्यागलाई मानवमा बुढेसकाल ढिलाइका साथै झुम्का र फाइन लाइनजस्ता बुढेसकालका लक्षणहरूलाई कम गर्नका लागि संकेत गरिएको छ। साइक्लोस्ट्रैजेनोल एंटी-एजिंग गतिविधि चार अलग-अलग संयन्त्रहरू मार्फत प्राप्त गरिन्छ। Cycloastragenol विरोधी बुढ़ापे संयन्त्र समावेश;
अक्सिडेटिभ तनावसँग संघर्ष गर्दै
अक्सिडेटिभ तनाव स्वाभाविक रूपमा हुन्छ जब शरीरमा फ्रि रेडिकल र एन्टिऑक्सिडन्ट बिच असंतुलन हुन्छ। यदि नियन्त्रण गरिएको छैन भने, अक्सिडेटिभ तनावले बुढेसकालको प्रक्रियालाई गति दिन्छ र साथै क्यान्सर, हृदय विकार र मधुमेह जस्ता दीर्घकालीन अवस्थामा पुग्न सक्छ।
साइक्लोआस्ट्रेजेनल एस्ट्रेलस एक्स्ट्र्याक्ट एक उत्कृष्ट antioxidant यौगिक हो र प्राकृतिक रूपमा अवस्थित antioxidants को क्षमता सुधार गर्दछ। यसले उमेर ढिलो गर्नमा ढिलाइ गर्दछ र उमेर-सम्बन्धित विकारहरूको घटना रोक्न पनि मद्दत गर्दछ।
साइक्लोस्ट्रैजेनोल टेलोमेरास एक्टिभेटरको रूपमा काम गर्दछ
कार्यको संयन्त्रको बारेमा माथिको सेक्सनमा छलफल गरिएझैं साइक्लोस्ट्रैजेनोलले टेलोमेरेस लम्बाउन मद्दत गर्दछ। यसले सेल विभाजनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यसैले ढिलो उमेर ढिलो हुन्छ। यसले शरीरका अ organs्गहरूलाई ठीकसँग सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ।
Cycloastragenol UV रे बाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ
जब एक समय अवधि को लागी घामको संपर्कमा पर्दछ शरीरको कोशिकाहरु बिग्रन्छन् र परिणाम स्वरूप राम्रोसँग काम गर्न असफल हुन्छन्। यो अकाउन्ट एजिंगको फार्ममा परिणाम हुन्छ जसलाई फोटो-बुढाइका रूपमा सन्दर्भ गरिन्छ।
साइकोलोस्ट्रेजेनल पाउडर बचाउन आउँदछ किनकि यो छालालाई यूवी किरणका हानिकारक प्रभावहरूबाट जोगाउनका लागि देखाइन्छ।
साइक्लोस्ट्रैजेनोलले प्रोटीन ग्लाइकेसन रोक्छ
ग्लाइकेसन एक प्रक्रिया हो जुन ग्लुकोज वा फ्रुक्टोज जस्ता चिनीले लिपिड वा प्रोटीनमा संलग्न गर्दछ। ग्लाइकेसन डायबेटिसका लागि बायोमार्करहरू मध्ये एक हो र बुढेसकालका साथै अन्य विकारहरूसँग सम्बन्धित छ।
Cycloastragenol पूरक ग्लाइकेसन उत्पादनहरूको गठन रोक्दै ग्लाइकेसनको कारण बुढेसकाललाई रोक्न मद्दत गर्दछ।
Iii।साइक्लोस्ट्रैजेनोलका अन्य सम्भावित स्वास्थ्य लाभहरू:
साइक्लोआस्ट्रेजेनल क्यान्सर उपचार
साइक्लोस्ट्रैजेनल क्यान्सर उपचार सम्भावना क्यान्सरयुक्त कोषहरूलाई नष्ट गर्ने, प्रतिरोधक क्षमता सुधार गर्ने र केमोथेरापीको हानिकारक प्रतिक्रियाहरूबाट जोगाउने क्षमताद्वारा देखाइन्छ।
स्तन क्यान्सर भएका व्यक्तिहरूको अध्ययनमा, cycloastragenol क्यान्सर उपचारको क्षमता reduce०% ले घटाउने यसको क्षमताले प्रदर्शन गरेको थियो।
हृदयलाई क्षतिबाट बचाउन सक्छ
साइक्लोस्ट्रैजेनोलले कार्डियक डिसफंक्शन बिरूद्ध संरक्षण प्रदान गर्न सक्दछ।
प्रेरित हृदय क्षति भएको मुसाको अध्ययनमा, साइक्लोस्ट्रैजेनोल पूरक मायोकार्डियल कोशिकाहरूमा अटोफेजीलाई बढावा दिएर साथै म्याट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज २ (एमएमपी -२) र एमएमपी-of को अभिव्यक्तिलाई दबाएर मुटुको रोगलाई कम गर्न मिल्छ।
Cycloastragenol समीक्षामा आधारित, यो हुन सक्छ निद्राको गुणस्तर सुधार गर्नुहोस्। जे होस्, क्लिनिकल अध्ययनहरूले निद्रालाई बढाउने क्षमतामा ठोस प्रमाण दिन आवश्यक पर्दछ।
डिप्रेसनसँग लड्न मद्दत गर्दछ
छोटो टेलोमेर निराशाजनक विकारहरू जस्तै मुड मुद्दाहरू र अल्जाइमर जस्ता रोगहरू पीडित व्यक्तिहरूमा फेला परेको छ।
जबरजस्ती पौडी खेल्ने परीक्षणमा चूहोंको अध्ययनमा, days दिनसम्म प्रशासित साइक्लोस्ट्रैजेनोल पूरकले उनीहरूको अशक्तता घटाउन भेटायो। यो न्युरोन्सको साथसाथै पीसी १ सेलमा टेलोमेरास सक्रिय पार्न प्रदर्शन गरिएको थियो जसले यसले एन्टि-डिप्रेसिसी सम्बन्धी क्षमतालाई वर्णन गर्दछ।
घाउ निको पार्ने कार्यमा तेजी ल्याउन सक्छ
मधुमेह बिरामीहरूमा घाउ निको पार्ने प्रमुख समस्या हो। घाउ निको पार्ने यो प्रक्रिया गतिविधिहरूको श्रृंखलाबाट हुन्छ। यी गतिविधिहरू हुन्; सूजन गतिविधि, थक्की, उपकला को बहाल, पुन: निर्माण र अन्तमा स्टेम सेलहरूको नियमन। यी उपकला स्टेम सेलहरू मधुमेह घाउ उपचारको लागि महत्वपूर्ण छन्।
यो प्रदर्शन गरिएको छ कि टेलोमेर डिग्रेडेसनले घाउको उपचारलाई नकरात्मक रूपमा असर गर्दछ। यो जहाँ cycloastragenol पाउडर छोटो telomere मर्मत गर्न को रूप मा आउँछ र कोशिका को विस्तार र गति बढाउन। यो बदले चाँडो घाउ मर्मत गर्न सहयोग गर्दछ।
कपाल स्वास्थ्य सुधार
व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरू द्वारा साइक्लोस्ट्रैजेनोल समीक्षाहरूले देखाउँदछ कि साइक्लोस्ट्रैजेनोलले कपाल झर्ने रोक्न, कपालको बृद्धि गर्न र कपालको रंग बढाउन मद्दत गर्दछ।
अधिक cycloastragenol astragalus निकासी लाभहरू छन्;
मानव CD4 + सेलहरूको बिरूद्ध एन्टि-भाइरल गतिविधि प्रदान गर्दछ।
बढावा दिने उर्जा।
छालाको स्वास्थ्य सुधार गर्दछ।
दृष्टि सुधार गर्न सक्छ।
साइक्लोस्ट्राजेनोलको मानक खुराक
मानक cycloastragenol खुराक दैनिक १० मिग्रि को बारे मा छ। यद्यपि यो एकदम नयाँ हो पूरै यसको खुराक ठूलो मात्रामा प्रयोग, उमेर र अन्तर्निहित चिकित्सा सर्तहरूमा निर्भर गर्दछ।
यो मानक साइक्लोस्ट्रैजेनोल खुराक t० बर्ष भन्दा बढि उमेरका व्यक्तिहरूमा बढाउनुपर्दछ पर्याप्त टेलोमेर विस्तारको लागि र बुढेसकालको प्रक्रिया सुस्त बनाउन।
के Cycloastragenol सुरक्षित छ?
साइक्लोस्ट्रैजेनोल पाउडर सामान्यतया केहि खुराक दायरामा सुरक्षितको रूपमा लिइन्छ। यद्यपि यो एकदम नयाँ छ पूरै सम्भव साइक्लोस्ट्रैजेनाल साइड इफेक्टहरू अहिलेसम्म थाहा छैन।
Cycloastragenol का भनेका फाइदाहरूमा केहि cycloastragenol समीक्षाहरूले यो तर्कसंगत प्रयोगको लागि वारेन्टी गर्न पर्याप्त निर्णायक हुँदैन।
यसका अतिरिक्त चिन्ताहरू पनि छन् कि साइक्लोस्ट्रैजेनोल पूरकले ट्युमरको विकासलाई बढावा दिदै क्यान्सरलाई तीव्र पार्न सक्छ। यो एक सैद्धांतिक अनुमान हो यस तथ्यमा आधारित छ कि cycloastragenol मुख्य मोड टेलोमेरे विस्तारको माध्यमबाट हुन्छ। यसैले यस्तो सोच्दछ कि यसले क्यान्सर कोषको बृद्धि गर्दछ।
त्यसकारण यो क्यान्सर बिरामीहरूलाई साइक्लोस्ट्रैजेनोल दिने बेवास्ता गर्नु राम्रो हो जबसम्म यस अनुमानको सम्बन्धमा भरपर्दो डाटा उपलब्ध हुँदैन र कुनै अज्ञात साइक्लोस्ट्रैजेनल विषाक्तताबाट बच्न पनि सकिन्छ।
हामी कहाँबाट उत्कृष्ट Cycloastragenol पाउन सक्छौं?
खैर, cycloastragenol बिक्री को लागी सजीलै अनलाइन र विभिन्न पोषण स्टोरहरूमा उपलब्ध छ। जहाँसम्म, तपाइँ अत्यधिक शुद्ध सायक्लोस्ट्रैजेनोल पाउनुहुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न अनुमोदित र सम्मानित साइक्लोस्ट्रैजेनोल आपूर्तिकर्ताहरूबाट बिक्रीको लागि साइकल्लोस्ट्रैजेनोल पाउडरको लागि सँधै अनुसन्धान गर्नुहोस्।
साइक्लोस्ट्रैजेनोल पाउडर प्रदर्शन गरिएको छ धेरै फाइदाजनक प्रभावहरू र अधिक यस्तै साइक्लोस्ट्रैजेनोल एंटी-एजिंग गुणहरू। साइक्लोस्ट्रैजेनोल टेलोमेरास एक्टिभेसन कार्यको मुख्य मोड हो जसले फलस्वरूप टेलोमेरे बढाउँदछ। यी धेरै जनावरहरूका मोडेलहरूमा प्रदर्शन गरिएको छ र केही पनि कृत्रिम परिवेशीय अध्ययन।
टेक्लोमेरको लम्बाइका लागि साइक्लोस्ट्रैजेनाल एस्ट्रोगलस एक्स्ट्र्याक्ट प्रभावको क्लिनिकल परीक्षणहरू थोरै छन् र यसैले ठोस प्रमाण दिन थप अध्ययन आवश्यक छ।
TE-65 को सम्भावित प्रभावलाई बढावा दिईएको कार्डियक डिसफंक्शन धेरै उथ्रो छ किनकि धेरै सीमित अध्ययनहरू यस TA-65 कार्यको समर्थनमा अवस्थित छन्।
विवरणमा साइक्लोस्ट्रैजेनोलको मेटाबोलिजम अध्ययन गर्नाले उपलब्ध डाटामा सुधार हुन्छ साथै अत्यधिक स to्कलनको कारण हुने कुनै पनि साइक्लोस्ट्रैजेनोल विषाक्ततालाई पनि उजागर गर्दछ।
थप अध्ययनहरूको लाभहरूमा cycloastragenol पूरकको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न। Cycloastragenol साइड इफेक्टहरू अझै थाहा छैन। तसर्थ, अनुसन्धान सम्भव निर्धारण गर्न निर्देशन दिनु पर्दछ cycloastragenol साइड इफेक्ट साथै अन्य औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया।
साइक्लोस्ट्रैजेनोल स्वास्थ्य लाभहरू बुझ्न, यसले यी क्याग कार्यहरू अन्तर्गत रहेको संयन्त्रहरूको अन्वेषण गर्न मद्दत गर्दछ।
थप रूपमा, उपयुक्त साइक्लोस्ट्रैजेनोल खुराकलाई विभिन्न उमेर समूहहरूको लागि सिफारिस गरिएको खुराक मूल्या evalu्कन गर्न थप अध्ययनहरू आवश्यक पर्दछ। बिभिन्न साइक्लोस्ट्रेजेनल आपूर्तिकर्ताहरूले बिभिन्न खुराकहरू निर्धारित गर्छन् जुन अनुसन्धान मार्फत मिलाउनुपर्दछ।
युआन याओ र मारिया लुज फर्नांडीज (२०१ 2017)। "टेलोमेरास एक्टिभेटरको लाभदायक प्रभाव (TA-65) दीर्घकालीन रोगको बिरूद्ध"। EC पोषण .6.5..176: १183-१XNUMX।।
वाang्ग, जे।, वू, एम। एल।, काओ, एस- पी।, काई, एच।, झाओ, जेड- एम, र गीत, वाई-एच। (२०१))। साइक्लोस्ट्रैजेनोलले मुसामा प्रयोगात्मक मुटु क्षतिलाई AeTT2018-RPS1KB6 संकेतको रोकावट द्वारा मायोकार्डियल ऑटोफ्यासी प्रचार गरेर अमेलेरेट गर्छ। बायोमेडिसिन र फार्माकोथेरापी, १०1, १०––-१–०107१। doi: १०.१०१1074 / j.biopha.1081
सूर्य, सी।, जियांग, एम।, झांग, एल।, यांग, जे।, Zhang, जी।, डु, बी,… याओ, जे। (२०१ 2017)। साइक्लोस्ट्रैजेनोल सक्रियता र प्रसार दमन कन्क्नानावलिन ए-प्रेरित माउस लिम्फोसाइट प्यान-सक्रियण मोडेलमा मध्यस्थता गर्दछ। इम्यूनोफार्माकोलजी र इम्युनोटोक्सिकोलजी, 39 (()), १–१-१––।। doi:3/ 131।
आईपी ​​एफ, सी, एफ, एनजी वाई, पी, एक एच, जे, दाई वाई, पंग एच, एच, हू वाई, क्यू, चिन ए, सी, हार्ले सी, बी, वोंग वाई, एच, आईपी एन, वाई: साइक्लोस्ट्रैजेनोल न्युरोनल कोषहरूमा शक्तिशाली टेलोमेरास एक्टिभेटर हो: डिप्रेसन ब्यवस्थापनको लागि प्रभाव। न्यूरोसिग्नल २०१ 2014; २२: -२-22।। doi: 52 / 63।
यू, योन्ग्जी र झोउ, लिमिन र याang्ग, याजुुन र लियू, युयू। (२०१))। साइक्लोस्ट्रैजेनोल: उमेर सम्बद्ध रोगहरूको लागि समीक्षा (उत्साह) को लागी एक रमाईलो उपन्यास उम्मीदवार। प्रयोगात्मक र चिकित्सीय चिकित्सा। १.. १०.2018 16 10.3892२ / etm.2018.6501।
साइकलोस्टेरगेनोल पावर (78574 94-4-))
२.साइक्लोस्ट्रैजेनल के हो?
The.साइक्लोस्ट्रैजेनोलको कार्य संयन्त्र
Cy.साइक्लोस्ट्रैजेनोलको मानक खुराक
I.के साइक्लोस्ट्रैजेनोल सुरक्षित छ?
W. हामी कहाँबाट उत्तम Cycloastragenol पाउन सक्छौं?